“Aniga Ayaa Ka Muruqyo Waaweyn Cristiano Ronaldo” – Ze
Halyeyga reer Brazil ee Ze Roberto ayaa rumaysan inuu ka jidh wanaagsan yahay xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo oo baraha bulshada kusoo bandhiga murqaha calooshiisa.
Ronaldo oo shan jeer ku guuleystay abaal-marinta xiddiga adduunka ee Ballon d’Or, waxa lagu tilmaamaa in jidhkiisu yahay sidii ciyaartoy 20 jir ah marka la eego sida uu u dhisan yahay iyo qaabka uu wali u ciyaarayo oo aanay ka muuqan inuu weynaaday.
Cristiano Ronaldo oo sannadkii labaad oo xidhiidh ah kula guuleystay Juventus horyaalka waddanka Talyaaniga ee Serie A, waxa uu kabta dahabka ah ka ridan kari waayey Ciro Immobile oo oo 36 gool ka dhaliyey horyaalka Serie A, isla markaana kabta dahabka ah ee Yurub ku garaacay Robert Lewandowski oo 34 gool uu xili ciyaareedku kaga dhamaaday.
Guulaha garoonka dhexdiisa uu ku gaadho Cristiano Ronaldo, waxa sabab u ah jimicsiga faraha badan iyo nasasho la’aanta xataa marka uu gurigiisa joogo, taas oo ay ka markhaati kaceen ciyaaryahanno uu mararka qaarkood ku casuumay hoygiisa.
Laakiin halyeygii reer Brazil ee Ze Roberto oo usoo ciyaaray kooxaha Bayern Munich oo uu guulo badan la gaadhay, Bayer Leverkusen iyo Real Madrid, ayaa soo bandhigay qaab dhismeed jidheed oo cajiib ah, kaas oo aad uga duwan midkii lagu yaqaanay intii uu kubadda cagta ku jiray.
Ze Roberto ayaa dhowaan ka yaabiyey taageereyaashiisii muddadii uu garoomada ku jiray, kaddib markii uu baraha bulshada soo geliyey muuqaalka gebi ahaanba ka beddelan sidii uu ahaa ee jidhkiisa, kaas oo noqday muruqyo miidhan.
46 jirkan oo waraysi siiyey Tyc Sport ayaa waxa uu sheegay in qaab dhismeedka jidhkiisa iyo muruqyadiisu ay ka fiican yihiin kuwa Ronaldo, waxaanu yidhi: “Maanta, waxaan idiin sheegayaa inaan ka jidh wanaagsanahay, sababtoo ah, waxaan ciyaarayay illaa 43 jirkaygii. Haddii uu sidaa sameeyo, waxaan sheegi doonaa inuu isagu iga wanaagsan yahay.”
Ze Roberto ayaa ciyaaraha ku jiray muddo 23 sannadood ah, waxaanu soo maray 10 kooxood oo ay ku jiraan Real Madrid, Bayer Leverkusen, Bayern Munich oo laba jeer oo kala duwan uu u ciyaaray iyo Hamburg, halka uu shan kooxood oo reer Brazil ahna u dheelay.
December 2017 ayuu si xog ah uga fadhiistay ciyaaraha isaga oo ka tirsanaa kooxda Palmeiras ee waddanka Brazil, taas oo uu hadda ka yahay lataliye dhinaca farsamada ah.